Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) - Hello Sayarwon
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း)
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Thiamine အား thiamineဓါတ် (ဗီတာမင် B1)ချို့တဲ့ခြင်းကို ကုသရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ဤဗီတာမင်သည် ကဆီဓါတ်(ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်)ကို ချေဖျက်သိုလှောင်ရန်၊ ခန္ဓါကိုယ် ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် အာရုံကြောများ အားကောင်းရန်အတွက် အရေးပါသည်။
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
thiamineကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Thiamine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Thiamine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Thiamine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Thiamine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Thiamine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအခြေအနေများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ.။
—>အကယ်၍ သင့်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိသည် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်
—>အကယ်၍ သင်သည် အခြားဆေးဝါးများကို သောက်သုံးနေလျှင် (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးဖြစ်စေ၊မိမိဖာသာသောက်သည့်ဆေးဖြစ်စေ၊သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ၊အခြားဖြည့်စွက်စာများ)
—>အကယ်၍သင်သည် ဆေး၊အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် ရာဇဝင်ရှိလျှင်
—>အကယ်၍ သင့်တွင် ကျောက်ကပ် ပြဿနာရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် A ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ —-> အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း(အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊လည်ချောင်း)၊အလွန်ထိုင်းမှိုင်းမူးဝေခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Thiamine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Thiamine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Thiamine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
—>အမျိုးသား = ၁.၂မီလီဂရမ်
—>အမျိုးသမီး = ၁.၁မီလီဂရမ်
—>၅-၃၀မီလီဂရမ်ကို အသားထိုးဆေးအဖြစ် တနေ့လျှင် သုံးကြိမ်။ ထို့နောက် ၅-၃၀မီလီဂရမ်ကို သောက်ဆေးအဖြစ် တနေ့လျှင် သုံးကြိမ်ဖြင့် တလတိတိ
—>၁၀၀မီလီဂရမ်ကို အကြောထိုးဆေးအဖြစ်ပေးရမည်။ ပြီးလျှင် နေ့စဉ် ၅၀-၁၀၀မီလီဂရမ်ကို ပုံမှန်အစာစားသည့် အချိန်အထိ။
—>တနေ့လျင် ဆေးတပြား သို့မဟုတ် တတောင့်
ကလေးတွေအတွက် Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
—>ဝ-၆လ = ဝ.၂မီလီဂရမ်
—>၆-၁၂လ = ဝ.၃မီလီဂရမ်
—>၁-၃နှစ် = ဝ.၅မီလီဂရမ်
—>၃-၈နှစ် =ဝ.၆ မီလီဂရမ်
—>၈-၁၃နှစ် = ဝ.၉ မီလီဂရမ်
—>၁၃-၁၈နှစ် = ၁.၂မီလီဂရမ်(အမျိုးသား)။ ၁မီလီဂရမ် (အမျိုးသမီး)
—>တနေ့လျှင် ၁၀-၁၅ မီလီဂရမ်ကို အဆင်ပြေသလို ခွဲတိုက်နိုင်သည်။
—>၁၀-၂၅ မီလီဂရမ်ကို အသားထိုးဆေး သို့မဟုတ် အကြောထိုးဆေး (သို့မဟုတ်) ၁၀-၅၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ် အနည်းဆုံး ၂ပတ်တိုက်ရမည်။ ထို့နောက် တနေ့လျှင် ၅-၁၀ မီလီဂရမ်ကို တလတိတိ ဆက်သောက်ရမည်။
Thiamin (Vitamin B1) (သိုင်ရာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Thiamine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပုံစံ —–>ဆေးပြား၊ဆေးတောင့်၊အရည်၊အလွှာပါးတထပ်အုပ်ထားသော ဆေးပြား
အချိုးအစား —–>100mg/ml ; ၁၀၀မီလီဂရမ်၊၅၀မီလီဂရမ်၊၂၅၀မီလီဂရမ်၊၅၀၀မီလီဂရမ်
Thiamine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Thiamin. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 965-
hiamine%20vitamin%20b1. Accessed September 19, 2016.
Thiamin. http://www.medicinenet.com/thiamine-oral/page2.htm. Accessed
Thiamin. http://reference.medscape.com/drug/vitamin-b1- thiamine-344428#0.
neral_Supplementation. Accessed September 19, 2016.